Screen-Scraper Extraction Platform: Basic Edition - Nyanzvi yeSemalt
Screen scraper ndiyo inoshandiswa zvikuru yevashandisi vewebhu uye feme dzinoda kutora huwandu hwemashoko ari paIndaneti, sehutano nemifananidzo, kubva kune mawebsite akasiyana-siyana. Chimwe chezvinhu zvakanakisisa zvokubvisa zvishandiso ndiro chisikiti- scraper software . Kubvira muna 2002, inobata nevatengi vanobva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzemaindasitiri, sa e-mabhizimisi, makambani ezvokurapa uye emotokari nezvimwewo. Ichokwadi, inoshanda se database, iyo inopa vashandisi vayo chisarudzo chekutora dhamoto kubva mazana emichina yeInternet kuburikidza newebhu.
Zvinyorwa zvitsva kubva paIndaneti
Screen-scraper inogona kubata chero nzvimbo ipi zvayo pawebhu - windows 7 vps uk. Iro team team ye screen-scraper inogona kubatsira vekutsvaga webhu kuti vawane migumisiro yavanoda. Vatengi vanofanira kungovaudza zvimwe ruzivo nezvehuwandu hwavanoda kubvisa uye mafaira ehuwandu hwavanoda kuwana. Screen-scraper inogona kubvunzwa kubva kune dzimwe shanduro mitauro, yakadai seJava, PHP nezvimwe.
Nei Uchishandisa Screen-Scraper
Iyo software inokudzwa uye makambani makuru makuru enyika inovimba kuti iwane ruzivo rwavanoda nenzira inokurumidza, iri nyore uye yakabudirira mumasekondi mashoma mashomanana. Screen-scraper inogona kubudisa data kune vashandi vayo zuva rega rega uye inokwanisa kubata chero chero rudzi rwewebsite mune ino makambani. Kunyanya, vatengi vanogona kutumira mibvunzo yavo uye kuwana mhinduro dzinodiwa pasina nguva.
Makomborero ekushandisa Screen Scraper for Companies
Chimwe chezvinhu zvinokosha zvikuru zvekrini scraper software inomhanya. Inogona kuunganidza data yose yevatengi mumasekondi mashoma. Ichokwadi, screen-scraper inopa mukana mukuru kune chero kambani inoda kuwana mitsva nokukurumidza. Semuenzaniso, kana vatengi vachida kutenga mitengo yemimwe michina yakapararira kwose kwewebhu, vanogona kushandisa iyi inoshamisa software program. Uyezve, chinyorwa-scraper chinogona kushandiswa kuendesa mamwe mashoko kubva kune imwe nzira kuenda pane imwe, kana inogonawo kusungirirana masangano pamwechete. Screen-scraper inotsigira huwandu hwemafomu ekutsvaga kudhonza zvicherwa, zvakadai seXML, HTML, CSV, Access uye zvimwe. Uyezve, data yose inotengeswa kune imwe nzira kune mamwe maitiro ayo akafananidzirwa nevatengi kamwe kana kudhonza kwedata kwapera.
Iko software huru cross-platform iyo inogona kushandiswa chero kupi zvako. Uyewo, ma-license akawanda e-software anowanika kutenga fomu yeUnited and Enterprise Edition. Inopa migumisiro yakakura kubva kune mazana emashandisi uye makambani. Icho chinyorwa chepachena chinyorwa chekushandisa chinoshanda nemhando ipi zvayo yemigodhi yekutsvaga, uyewo mashizha ane simba. Vashandi vanogona kutora purogiramu nokukurumidza uye nyore nyore uye vatange kushandisa shanduri iyi kuwana dhesi ravanoda.